DataNumen: Isiqinisekiso sokuBuyisa ngokuBalaseleyo
Ikhaya Esona siqinisekiso sokubuyisela siqinisekileyo-Thenga ngokuzithemba
Esona siqinisekiso sokubuyisela siqinisekileyo-Thenga ngokuzithemba
Sinikela eyona iimveliso zokubuyisela idatha kunye neenkonzo emhlabeni. Kungenxa yoko le nto sidale yethu Esona siQinisekiso sokuBuyisa kwakhona -Ukuhlala unokuthenga iimveliso kunye neenkonzo zethu ngokuzithemba nge-100%.
Yeyiphi eyona Guarantee yokuBuyisa ngokuBalaseleyo?
Ilula! Siqinisekisa iimveliso zethu kunye neenkonzo ziya kufumana kwakhona idatha yakho enkulu kwifayile eyonakeleyo, inkqubo okanye izixhobo zekhompyutha. Ukuba ungafumana isixhobo esinokuphinda sibuye Kaninzi idatha kuneyethu, siya kuthi Kubuyiselwa imali i-oda yakho ngokupheleleyo!
Sisebenza phi isiQinisekiso sokuBuyisa iXabiso ngokuPhambili?
Esona siQinisekiso sokuBuyisa ngokuBalaseleyo sigubungela zonke iimveliso zethu kunye neenkonzo.
Ndisisebenzisa njani isiQinisekiso sokuBuyisa ngokuBalaseleyo?
Nanini na xa ufumana isixhobo esinokuphola Kaninzi idatha kunale yethu, nceda ubhalele kwisebe lethu lokuthengisa ngqo kwi sales@datanumen.com ukufumana yakho Kubuyiselwa imali ngokukhawuleza.